ဟေဂျာဗ် - သန့်စင်မှု
အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ဟိဂျဘ် ၀တ်ဆင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားမှုအား တူရကီ ပယ်ဖျက်
September 26, 2014 - 10:39 PM
News Code : 640457
ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း သမိုင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ဟိဂျဘ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားမှုကို တူရကီအစိုးရက ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
– ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း သမိုင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ဟိဂျဘ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားမှုကို တူရကီအစိုးရက ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
အားလပ်ရပ်ပြီးနောက် ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် တူရကီ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် အာရင့်က ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းဝတ်စုံဥပဒေတွင် ယခင်က ဦးခေါင်းဗလာ ဖြစ်နေရမည်ဟူသည့် သတ်မှတ်ချက်အား ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် တူရကီ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ဟိဂျဘ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အာရင့်ကမူ ဟိဂျဘ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လာမည့် နှစ်ရက်အတွင်း ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ဟိဂျပ်ဝတ်ဆင်ခြင်း ပိတ်ပင်မှု ပယ်ဖျက်ခြင်းအား တူရကီရှိ လောကီသီးသန့်ဝါဒီ အချို့က ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် တူရကီဝန်ကြီးချုပ် အာဒိုဂန်၏ တရားမျှတမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှာ တက္ကသိုလ်များတွင် ဟီဂျဘ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည့် ပြဌာန်းချက်အား ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင်လည်း အစ္စလာမ့်မစ်ကျောင်းများတွင် ဟိဂျဘ်ဝင်ဆင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းအား တူရကီအစိုးရက ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကလည်း တရားသူကြီးများ၊ ရှေ့နေများ၊ ရဲအရာရှိများနှင့် စစ်သမီးများမှလွဲ၍ အစိုးရ ဌာနများတွင် ဟိဂျဘ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်းအား ၀န်ကြီးချုပ် အာဒိုဂန်က ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် အောက်တိုဘာလတွင် အမျိုးသမီးအမတ်တစ်ဦးက ၁၄ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဟီဂျဘ်ဝတ်ကာ ပါလီမန်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဟဇရသ် မအ်စူမာ ယေ ကွမ်း (سلام الله علیها) ရောင်ဇာ တွင်သုံးသည့် ဂျဒဲရ်များ အား ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် ဆေးကြော ။ ။ photos
February 25, 2020 - 3:34 AM
ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် ၏ မွတ်ဂ်ျသဟစ်ဒ် အဆင့်ရှိသူ များအား ဒရ်စ်စေ ခါရေဂ်ျ ပေးနေသည့် မြင်ကွင်း ။ ။ photos
February 25, 2020 - 3:06 AM
ရောဂါဝေဒနာ ကို ဆဒ်ကာပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းမှုကို ရယူပါ
February 24, 2020 - 11:59 PM
အာယာသွလ္လာဟ် မစ်ဗါဟ် ယဇ်ဒီး အနေဖြင့် ပြည်သူလူထု နှင့်အတူ တန်းစီး၍ မဲ ပေး
February 24, 2020 - 11:56 PM
February 24, 2020 - 11:44 PM
(၁၁) ကြိမ်မြောက် ပါလီမန်ရွေး ကောက်ပွဲ တွင် မဲပေးနေသူများ ၊ အစ္စဖဟန် ။ ။ photos
February 23, 2020 - 11:59 PM
(၁၁) ကြိမ်မြောက် ပါလီမန်ရွေး ကောက်ပွဲ တွင် မဲပေးနေသူများ ၊ ကွမ်း ။ ။ photos
February 23, 2020 - 11:57 PM
တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ သူပုန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဒုသမ္မတ ၁ အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို
February 23, 2020 - 11:50 PM
ကိုဗစ်ဒ်နိုင်တင်းန် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ
February 23, 2020 - 11:40 PM
ဂျွန်မ်အာ နမာဇ် အပြီး ထမင်း ဖြင့် ဧည့်ခံ ၊မန္တလေး ရှီအာ ဗလီ ။ ။ photos
February 22, 2020 - 12:43 AM
February 22, 2020 - 12:20 AM
အမျိုးသားရေး အကျိုး အမြတ် များ ကို လိုလားသူ မည်သူမဆို မဲ ပေးမည် ဖြစ်ပါတယ် / ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ်
February 21, 2020 - 11:49 PM
February 21, 2020 - 11:41 PM
အီရန် နိုင်ငံ ထုတ် ကားအသစ် ၄ မျိုး အီရန်သမ္မတ လက်ဖြင့် ပွဲဦးထွက် ။ ။ photos
February 20, 2020 - 3:44 AM
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ ဇဲဟ်ရာဟ် (سلام الله علیها) မွေးနေ့ ကျင်းပ ၊ တူရကီ ။ ။ photos
February 20, 2020 - 3:41 AM
အီရန် နိုင်ငံ (၁၁) ကြိမ် မြောက် လွတ်တော် အမတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေငြာစာတန်း အချို့ ၊ အစ္စဖဟန် ။ ။ photos
February 20, 2020 - 3:17 AM
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ ဇဲဟ်ရာဟ် (سلام الله علیها) မွေးနေ့ ကျင်းပ ၊ ဂျာမဏီ ။ ။ photos
February 19, 2020 - 11:59 PM
ရဲဟ်ဗရ် အင်န် ကေလာဗ် နှင့် အာဇာဘိုင်ဂျန် အရှေ့ ပိုင်း ပြည်သူများ တွေ့ဆုံ ။ ။ photos
February 19, 2020 - 11:46 PM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ ၏ နေအိမ် သို့ ဟေစ်ဘွလ္လာဟ် ကိုယ်စားလှယ် တော် လာရောက် ။ ။ video
February 19, 2020 - 1:06 AM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက်မဂ်ျလစ် ကျင်းပ ၊ အင်ဒိုနီးရှား ။ ။ photos
February 19, 2020 - 12:44 AM
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲ နှင့် ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ကျင်းပ ဂါနာ ။ ။ photos
February 18, 2020 - 11:58 PM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက်မဂ်ျလစ် ကျင်းပ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ။ ။ photos
(ခါသန်မ် ဆိုလိုင်မန်နီ ) အမည်ရှိ စာအုပ်မှ ရွေးချယ် ထားသည့် ဓာတ်ပုံအချို့ ။ ။ photos
ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ ဇဲဟ်ရာဟ် (سلام الله علیها) မွေးနေ့ ကျင်းပ ၊ ကာရ်ဂေးလ် ။ ။ photos
February 18, 2020 - 12:38 AM
တရုတ်ခရီးသွားများ ကျန်းမာရေးအာမခံချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ခရီးသွားကုမ္ပဏီများနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များ ကန့်ကွက
February 17, 2020 - 11:57 PM
အမေရိကန် တာလီဘန် ဆွေးနွေးပွဲ အာဖဂန်နိုင်ငံတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများ လျှော့ချနိုင်မည်ဟု ကုလမျှော်လင့်
February 17, 2020 - 11:51 PM
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီ ၏မိသားစု အား ၎င်း ၏ ကဗဲရ် ဘေးတွင် တွေ့ရ စဉ် ။ ။ photos
February 16, 2020 - 10:51 PM
မြူးနစ် လုံခြုံရေးညီလာခံကို လူ ၃၀၀၀ ခန့် ဆန္ဒပြ
February 16, 2020 - 10:25 PM
ဤဈာပနာ အခမ်းအနား သည် အကြမ်းဖက် သမား တစ်ယောက်၏ ဈာပနာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား ? ။ မြန်မာ စာတန်းထိုး ။ video
တပ်နဲ့ ကေအန်ယူဆွေးနွေးပွဲ လာမယ့် ၁၉ ရက်နေ့ ကျင်းပမယ်
February 16, 2020 - 1:37 AM
အီတလီ လမ်းမ များပေါ်တွင် ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီ ၏ ဓာတ်ပုံများကို တွေ့ မြင်ရ
February 16, 2020 - 1:25 AM
ကရ်ဗလာ မြို့တွင် ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ နှင့် အပေါင်းအပါးများ အတွက် မဂ်ျလစ်ကျင်းပ ၊ ဂါရဝ ပြု ။ ။ photos
February 15, 2020 - 11:56 PM
အကီးလက်စွပ် ၏ လှိူ့ဝှက် ချက်ကို ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြ ။ ။ video
February 15, 2020 - 11:48 PM
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက် ကျဲဟ်လွန်မ် ကျင်းပ ၊တီဟီရန် ။ ။ photos
February 15, 2020 - 4:23 AM
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက် ကျဲဟ်လွန်မ် ကျင်းပ ၊အစ္စဖဟန် ။ ။ photos
February 15, 2020 - 4:08 AM
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လူရွယ်များ မှ ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီ အတွက် ကျဲဟ်လွန်မ် ကျင်းပ ၊ကွမ်း ။ ။ photos
February 15, 2020 - 4:01 AM
ရှဟီးဒ် အဘူမဲဟ်ဒီ မိုဟန်ဒစ် ၏ အမှတ်တရ များ ။ ။ photos
February 15, 2020 - 3:53 AM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ ၏ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး နှင့် စာရိတ္တ ကိုဖော်ပြနေသည့် banner ၁၀ခု ။ ။ Infographic
February 15, 2020 - 3:47 AM
သမ္မတထရမ့်၏ အီရန်အပေါ် စစ်မက်ပြုနိုင်မှုအား ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေကြမ်း အထက်လွှတ်တော်ထောက်ခံ
ဤဈာပနာ အခမ်းအနား သည် အကြမ်းဖက် သမား တစ်ယောက်၏ ဈာပနာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား ? ။ အာရဘီ စာတန်းထိုး ။ video
February 14, 2020 - 10:39 PM
အီးယူက ဗီယက်နမ်ကို ဈေးကွက်တံခါးဖွင့်ပေးပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ကုန်သွယ်ရေးရပ်ဆိုင်း
February 14, 2020 - 10:16 PM
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန် နီ ၏ ရှဟာဒသ် ၏ ရက် (၄)၁) ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ ၊ ရှဟီးဒ်ဒေ ဟစ်မတ်သ် တက္ကသိုလ် တွင်ကျင်းပ ။ ။ photos
February 13, 2020 - 11:21 PM
ဤဈာပနာ အခမ်းအနား သည် အကြမ်းဖက် သမား တစ်ယောက်၏ ဈာပနာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား ? ။ ။ video
February 13, 2020 - 11:11 PM
ကာရ်ဂေးလ် ပြည်သူ လူထု မှ ဒဲဟ်ဟေဖဂ်ျရ် နှင့် ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ ရက် (၄၀) အတွက် ချီတက် ဂုဏ်ပြု ၊ အိန္ဒိယ ။ ။ photos
February 13, 2020 - 10:50 PM
Sierra Leone တွင် ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန် နီ အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် ကျင်းပ ။ ။ photos
February 12, 2020 - 11:21 PM
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီ ကို သတ်သူများ အတွက် တိုက်တန်သည့် အပြစ် တောင်းဆို ဆန္ဒပြ ၊ ပါကစ္စတန် ။ ။ video
February 12, 2020 - 10:59 PM
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန် နီ နှင့် အဘူ မဲဟ်ဒီ တို့ အတွက် ဗဆွာရဟ် မြို့ တွင် ကျဲဟ်လွန်မ် ကျင်းပ မည် ၊ ပိုစတာ
February 12, 2020 - 10:53 PM
ရှဟီးဒ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆိုလိုင်မန်နီအား ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီး မှ အချစ်ထားသူ များ ၏ ရင်ဖွင့်သံများ ။ ။ video
February 12, 2020 - 10:48 PM
ကူဝိတ် နိုင်ငံ ၏ အမီးရ် မှ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး ၏ အောင်ပွဲ ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် မိုဘာရတ်က် ပြောကြား
February 12, 2020 - 2:27 AM
ကာတာနိုင်ငံ ၏ အမီးရ် မှ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး ၏ အောင်ပွဲ ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အတွက် မိုဘာရတ်က် ပြောကြား
February 12, 2020 - 2:11 AM
ဆော်ဒီ နိုင်ငံသား အကြမ်းဖက် ခေါင်းဆောင် အလ်မိုဟ်စင်နီ စစ်တိုက်ဖို့ ညာသံ ပေး မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည့် အလ်အီစ် ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်
February 12, 2020 - 1:57 AM
ရသေ့တောင်တွင် တိုက်ပွဲကြောင့် တပတ်ကျော်အတွင်း စစ်ရှောင် ၁ သောင်းခန့် ထွက်ပြေး
အမေရိကန် အခြေဆိုက် စစ်စခန်း အားဒုံးကျည်များ နှင့် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်မှု သည် အီရန်ပြည်သူလူထု ၏တောင်းဆို မှု ဖြစ်ပါတယ်၊ အီရန်သမ္မတ
February 11, 2020 - 11:56 PM
ရှီအာမွတ်စလင်မ် တို့၏ပင်းမ ကျမ်းကြီး များ
February 11, 2020 - 11:54 PM
(၄၁) မြောက် အီရန် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲ ချီတက်ပွဲ ၊ အစ္စဖဟန် ။ ။ photos
February 11, 2020 - 11:52 PM
(၄၁) မြောက် အီရန် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲ ချီတက်ပွဲ ၊ ကွမ်း ။ ။ photos
February 11, 2020 - 11:36 PM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန် နီ နှင့် ရှဟီးဒ် အဘူ မဲဟ်ဒီ အတွက် ရက် ၄၀ကျင်းပ ၊ကရာချီ ။ ။photos
February 10, 2020 - 11:58 PM
အာယာသွလ္လာဟ်မကာရေမ် ဘက်မှ ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန် နီ အပေါင်းအပါး ရှဟီးဒ် များ အတွက် အောက်မေ့ ဖွယ် ကျင်းပ၊ကွမ်း ။ ။photos
February 10, 2020 - 11:51 PM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန် နီ နှင့် ရှဟီးဒ် အဘူမဲဟ်ဒီ အလ်မိုဟန်ဒစ် တို့ အား အောက်မေ့ ဖွယ် ကျင်းပ၊ကွမ်း ။ ။photos
February 10, 2020 - 11:32 PM
ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်မန်နီ ၏ ကဗဲရ် သို့ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံဇေယာရသ် ပြုသူများ သွားရောက် မာတမ် ပြု ။ ။ photos
အီရန် လေတပ် အရာရှိများ အမှု ထမ်းများ နှင့် ရဲဟ်ဗရ် တွေ့ဆုံ ။ ။photos
February 9, 2020 - 11:49 PM
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး ၏ ၄၁ နှစ်မြောက် အောင်ပွဲ အခမ်းအနား ရုံးတွင် ကျင်းပ ၊လာဟိုရ် ။ ။photos
February 9, 2020 - 11:29 PM
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရန် တရုတ်ကို ရုရှားက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ကူညီ
February 9, 2020 - 11:18 PM
အီဒလစ်ပြည်နယ်က သူပုန်စခန်းကို ဆီးရီးယားအစိုးရ တိုက်ခိုက်
February 9, 2020 - 11:11 PM
အီရန်နှင့် အမေရိကန်၏ အနှစ် ၄၀ကြား တင်းမာ မှု ပြ ဗီဒီယိုကလစ်
February 9, 2020 - 11:06 PM